E nwere ụzọ ole na ole ị nwere ike isi nyere aka na mmepe nke ibe a
Ndepụta ndepụta Bird: Ana m aga n'ihu na-arụ ọrụ na nhazi data. Ọ bụrụ na ị nwere ndọtị ma ọ bụ mgbakwunye iji mee ihe na ndenye akwụkwọ dị ugbu a, ma ọ bụ ndenye ederede maka mpaghara ọhụrụ ọ dịbeghịrị, ọ ga-amasị m ịnụrụ gị.
Ebe nchekwa data ndụ: Otu n'ime ihe ọzọ na-agbakwunye na peeji nke a ga-abụ ozi gbasara ndụ nnụnụ. Amalitela m ịchịkọta ozi gbasara oge nkwụsịtụ, oge nkwụsị, ndụ nlanarị, wdg, karịsịa maka nnụnụ nnụnụ North America, ma a ka nwere ụzọ dị ogologo iji na-ekpuchi ụdị nnụnụ niile. A ga-enwe ekele dị ukwuu maka ozi ọ bụla i nwere ike inye maka akụkọ ndụ.
nsụgharị: Ebe a dịlarị n'asụsụ dị iche iche, ana m enwekarị mmasị ịgbakwunye ndị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị inye nsụgharị ọhụrụ, Enwere m ike iziga gị akwụkwọ Excel nke nwere ederede nke saịtị a (ihe dị ka okwu 6000). Anọ m na-achọkarị okwu nnụnụ na asụsụ ndị ọzọ.
Ọ ga-amasị m ikele ndị niile nyerela m aka iwulite Avibase kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ ezie na emeela m mgbalị ọ bụla nwere ike ịgụnye aha onye ọ bụla nyere m aka na listi dị n'okpuru ebe a, ana m arịọ mgbaghara maka onye ọ bụla na echefuola m. M ga-eji obi ụtọ tinye aha gị ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ m. N'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ na, n'ihi ihe ọ bụla, ịchọrọ na aha gị apụtaghị na ndepụta a, biko nyekwara m aka.
* na-egosi onye inyeaka pụrụ iche nke nyere nnukwu ego
Avibase abiala 329,054,239 oge kemgbe 24 June 2003. © Denis Lepage | Amụma nzuzo